သစ်ရွက်ကမ္ဘာ | Just another WordPress.com weblog
ကျွန်တော့ ဘ၀ရဲ့ မီးအိမ်ရှင် ! December 10, 2010
Filed under: တွေးမိတွေးရာ — tawtharkonyi @ 3:14 am
အချစ်ဆိုရော အရာနှင့် မကြာခဏ ခလုပ်တိုက်ခဲ့ဖူးပါ၏..။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၁၈ မိနစ်ခန့် ။
အလင်းတစ်ခုက ထိုလမ်းမပေါ်မှာ ခပ်ရေးရေး ထင်ရှားစေလို့ 
ဒါဏ်ရာများနှင့်လူသားတစ်ယောက် ယိုင်နဲ့ နဲ့ အတွေးတွေချီ
ပွေ့ ရင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက် အားအင်တွေ ကုန်ဆုံးနေသလို လို
အဆိပ်ပြင်းတဲ့ဆူး ချွန်ထက်လှတဲ့ ခလုပ်တွေရဲ့ဒဏ် မာယာ
တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့အောက်မှာ အလူးအလဲနဲ့ 
အတ္တတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့သူတို့ ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမီးအိမ်အတွက် နှလုံး
သားနဲ့ မီးညှိပေးခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေရဲ့
မနက်ဖြန်ဆိုတာ သူတို့ အတွေးထဲမှာ ရှိမနေခဲ့တာအသေချာပဲ။
မလှမပနဲ့ ပေါ့ သတ်ပုံအလွဲ၊သဒ္ဒါအကွဲနဲ့ အချစ်ကို ထုဆစ်ခဲ့
မိတယ် သာမန်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်
အုံကတော့ အသက်ငင်နေတုံးပေါ့ ….
နှင်းမည်းမည်းတွေကျတဲ့ည က မကောင်းဆိုးရွားထက်တော့
သာမှာပေါ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမခြေလှမ်း ….
အယူဆတွေ အထပ်ထပ်ချိုးဖျက် ရိုးသားခြင်းတွေ အတိအ
လင်းဝတ်ဆင်လို့ ကျွန်တော်ခြေလှမ်း မညိုးနွမ်းပါဘူး..ဖောက်
ဖောက်ကြည့်စရာ နောင်တတွေများလွန်းတော့လဲ ယုံကြည်
ချက်တွေကတော့ ဖရိုဖရဲနဲ့ ပေါ့ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကလဲ
ထပ်တူမကျနိုင်တော့ တွေဝေခြင်းတွေနဲ့ ရူးသွပ်မှုတွေ ဆိုတဲ့
အစွန်နှစ်ဘက်မှာ လျှစ်လှူရှုရင်း ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ် ပျော်ရွှင်စွာ
ဖြတ်သန်းစီးမျောခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်နေ့ ရက်တွေကိုလွမ်းဆွတ်
ရင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အပစ်မကင်းမှတော့ ကျွန်တော်ရဲ့
ရနံ့ ဟာသင်းရဲ့လား အနံ့ ကင်းတဲ့စကားလုံးတွေခင်းကျင်းပြ
သဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရိုးသားမှုဟာလုံလောက်ရဲ့လား ရာသီအကူး
ပြောင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေသေဆုံးတိုင်း ကျွန်တော်အပြုံး
တွေခဏခဏပျောက်ဆုံးတာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပြောမပြဖြစ်ဘူး။
သူတို့ ရဲ့စုတ်ချက်တွေ သိပ်ပျင်းလွန်းတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ပန်းချီ
ကားနာကျင်နေပါပြီ ငါ့မျက်လုံးတွေေ၀၀ါးလို့ ငါ့နှလုံးသားတွေ
လဲခြောက်ခြားကုန်ပါပြီ ဥပဒေမဲ့အလွမ်းတွေယောင်ကိုင်းလို့ 
အလွမ်းကဗျာတွေလဲ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် စပ်လို့ နှလုံးသားက
အနီးမှုန်နေတော့ ကာရံတွေလဲ လွဲကုန်ပါပြီ။ ဆရာဇော်ဂျီက
အလွမ်းကဗျာတွေ မရေးခဲ့ပါဘူး။ သူ့ ကိုလဲငါသိဖို့ မလိုပါဘူး။
ငါ့နောက်ကျောက ဒါဏ်ရာ ဗလပွကတော့ အတ္တဆူးတွေ
ကြောင့်ဖြစ်မှာပါ ငါ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲက ရှုပ်ပွနေတဲ့ စကားလုံးတွေ
ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖော်နိုင်ဖို့ ထောက်စဖို့ အဘိဓ္ဓါန်စာအုပ်ကြီးကလဲ
ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးပန်းလာတဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်
ဝေဒနာကတော့ လက်ဝဲဘက် ရင်အုံမှာ မင်းမူဆဲပဲ………
အော်.. တစ်ယောက်ထဲရန်ဖြစ်ရတာနဲ့ နေ၀င်သွားတာတောင်
ဟိုရှေ့မှာ မီးအိမ်လေး မထိန်တထိန်နဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံး ငါသွား
ရင်ကောင်းမလား ပြေလျှော့နေတဲ့ခံနိုင်ရည်တွေကို သံပတ်
ဖွင့်ထားတဲ့အိမ် တံခါးရဲ့ အပေါက်ဝမှာ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
ဆိုတဲ့စာတန်း ချိတ်ဆွဲမထားပေမဲ့ နွေးထွေးမှု အငွေ့ အသက်ကို
စတင်ခံစား လိုက်ရတယ် ၀င်ခွင့်ပြုပါ မတောင်းဆိုခဲပေမဲ့ ရိုးသား
တဲ့အပြုံးတပွင့်က အေးချမ်းစေခဲ့တယ် စိတ်ဓါတ်တွေအဆိပ်တက်
နေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ခံစားချက်တွေ နူးညံ့စေခဲ့တယ်။
ရွှေဝါရောင် ကကြိုးကွက်တွေနဲ့ လင်းလက်နေတဲ့ မနက်ခင်း
နေ၀င်သွားတဲ့ ညနေခင်းတိုင်းဟာလဲ သာယာစေခဲ့တယ် ။
နေ့ စွဲတိုင်းဟာ အမြဲလိုလိုပြောင်းလဲနေပေမဲ့ တိုက်ခတ်နေတဲ့
လေပြေတွေထဲမှာ အနံ့ ကင်းစင်တဲ့ရသတစ်ခု ခံစားမိတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ သူ ရင်ဘတ်လေးထဲက နှလုံးသားအိမ်
လေးမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ် အခွန်မကောက်ဘူး၊
မီးပွိုင့်မဆောက်ဘူး၊ ဗီဇာမလိုဘူး၊ သံယောဇဉ် အနွေးမေတ္တာ
တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဒီရင်ခွင် ဒီလောက်ခမ်းနားနေလိမ့်မယ်လို့ 
ချစ်သူရေ July 20, 2010
Filed under: Uncategorized — tawtharkonyi @ 2:41 pm
မင်းအတွက် စကားတခွန်းပြောဖို့ ကျန်သေးတယ်
“I’ll be die” (ငါသေလိမ့်မယ်)
“You know, How much I love you?”
“မင်းကိုမုန်းဖို့ ရင်ဘတ် ငါ့မှာ မရှိခဲ့ဘူး” July 19, 2010
Filed under: တွေးမိတွေးရာ — tawtharkonyi @ 7:20 pm
အဲလိုနဲ့ ကောင်မလေး မွေးနေ့ ရောက်တော့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို
မွေးနေ့ လက်ဆောင်တောင်းတယ် …။ ကောင်မလေး တောင်းတဲ့မွေးနေ့ လက်
ဆောင်က ခပ်ဆန်းဆန်းလေးပါ .. သူ့ ရဲ့မွေးနေ့ အနေနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ရင်ဘတ်
ထဲက သူ့ အတွက် အမုန်းတွေ အကုန်တောင်းသွားတယ်… ….. တနေ့ တော့
ကောင်မလေးက နောက်ထပ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပြောင်းချစ်မိသွား
တယ် ..။ကောင်လေးက တော်တော်ခံစားခဲ့ရတာပေါ့…သစ္စာ မဲ့လွန်းတဲ့ချစ်သူ
အတွက် ရင်နာခဲ့ရတယ်..။ကောင်မလေးကို ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ
အကြိမ်ပေါင်းများစွားအတွက် တုန့် ပြန်မှူမရခဲ့ဘူး..။ရင်နဲ့ အမျှ ပေးဆပ်ချစ်ခဲ့တဲ့
အချစ်တွေ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ လျှစ်လျှူရှု အစော်ကားခံခဲ့ရတယ်..။
“နင့်လိုသစ္စာမရှိတဲ့ မိန်းမ ငါမုန်းပစ်လိုက်မယ်….အော် မေ့နေလိုက်တာ
သူ့ ကိုငါမုန်းခွင့်မရှိတော့ဘူး….ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက အမုန်းတွေသူ့ အတွက် ပေးခဲ့
စက်ရုပ်လိုနေ March 26, 2010
Filed under: ပေါက်ကရ ကဗျာလေးတွေ — tawtharkonyi @ 4:18 pm
*ဦးနှောက်ပါ၍ ၊ မှား၏မှန်၏ ၊ သိသာသိလျှက်
*မျက်စိပါ၍ ၊ မြင်သာမြင်၏ ၊ ကြည့်နေမိလျှက်
*နားတို့ ပါ၍ ၊ ကြားသာကြား၏ ၊ နားထောင်မိလျှက်
*နှလုံးသားပါ၍ ၊ ချစ်တတ်မုန်းတတ် ခံစားတတ်ပြန်
သံပါတ်ထိန်းချုပ် ၊ စက်ရုပ်ဖြစ်လျှက် ဘာလို့ စက်ရုပ်လိုမနေတာပါလိမ့်…ငါဆောင့်ကန်လိုက်ရ….:P
တမ်းချင်း…..သို့January 25, 2010
Filed under: ပေါက်ကရ ကဗျာလေးတွေ — tawtharkonyi @ 6:44 pm
တကယ်လို့ များ မင်းရဲ့ကောင်းကင်ပြိုလဲလို့ 
နားစရာ နေရာ မရှိတော့ရင်
နှလုံးသားအစုံကို ဖွင့်လို့ ပေါ့…………….။။။။။။
Filed under: ပေါက်ကရ ကဗျာလေးတွေ — tawtharkonyi @ 5:59 pm
မင်းနဲ့ ငါ ချစ်နေခဲ့တာ
လျှို့ဝှက် ချက်ကိုယ်စီနဲ့ 
မင်း မချစ်မှန်း သိလျက်နဲ့ 
ကျွန်တော်နှင့်မတည့်သော….. January 12, 2010
Filed under: တွေးမိတွေးရာ — tawtharkonyi @ 10:38 pm
အနားယူထားတာလဲ လနဲ့ ချီနေပြီဆိုတော့ စာလေးဘာလေး လုပ်အုံးမှပါပဲလေ ဆိုပြီးတော့ စာအုပ်
လေးကောက်ဖွင့်လိုက်တယ် အဲဒီချိန်မှာပဲ တောင်ဆိုတက်လာတယ် chat box က “ညီလေးမှာ မုန်လာဥနီ ၀ယ်ပြီးသားရှိလား” တဲ့ “ဟုတ်ကဲ့ အကို ရှိတယ်” ပေါ့ “အင်း ညီလေး အကို လာယူအုံးမယ်” တဲ့ ဆိုတော့ သူက အကြီးဆိုတော့ လာယူလို့ ဘယ်ကောင်းမလဲ သွားပေးလိုက်တာပဲ
ကောင်းပါတယ် “ကျွန်တော်လာပေးမယ် အကို ခဏလေး” ဆိုပြီး သွားပေးလိုက်တယ် အဲဒီမှာ စကားလေးဘာလေးပြောလိုက်တာ ၁၅ မိနစ်လောက်တော့ကြာတာပေါ့ ပြီးတော့ စာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်ထိုင်လိုက်တယ် အမှန်တော့ ဆက်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး တစ်လုံးမှကို မကြည့်ရသေးတာပါ အဲဒါနဲ့ ပြန်ထိုင်တော့ စာအုပ်လေး ဒုတိယ အကြိမ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် “ဟိတ်ကောင် ဟိုနေ့ က မင်းကြည့်တဲ့ကားလေး ရှယ်လိုက်စမ်းပါ” တဲ့ ဟိုဘက်ခန်းက သူငယ်ချင်း
တစ် ယောက်က “အင်း ဘယ်ကားလဲ” ဟိုနေ့ ကကြည့်တဲ့ကားတွေက အများကြီးကို ရုပ်ရှင်သာကြည့်
တာ ရုပ်ရှင်နာမည်တွေ မမှတ်ထားတတ်တာဆိုတော့ ဘယ်ကားကိုပြောမှန်းမသိဘူး အဲဒါနဲ့ မင်းဘာ
သာ လာရှာတော့ဆိုပြီးတော့ ကွန်ပြုတာရှေ့ကနေ ထပေးလိုက်တယ် သူပြောတဲ့ကားတွေရော မဆိုင်တာတွေရော ရှာလိုက်တာ နာရီဝက်နီးပါလောက် မွှေသွားတယ် သူထသွားတော့မှ စာ ပြန်လုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်ဆိုပြီး တတိယ အကြိမ်စာအုပ်လေး ပြန်လှန်လိုက်တယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခြေထောက်က အငြိမ်မနေဘူး အောက်က မီးခလုတ်ကို သွားကန်လိုက်တော့ ကွန်ပြူတာ ပိတ်သွား
ရော ကွန်ပြူတာ မဖွင့်ထားရင်စာလုပ်လို့ က အဆင်ပြေဘူးလေ ဘာသာပြန်တာက ကွန်ပြူတာက မသိတဲ့စာလုံးလေးတွေ ရှာပေးတာ ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာ ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် သိပ်မစောင့်ရပါဘူး ၁ မိနစ် လောက်ပဲစောင့်ရတာပါ ကွန်ပြူတာ ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ အင်တာနက်ချိတ် ဂျီမေးတွေ ဘာတွေပြန်ဝင်ရတာပေါ့ ပြီးတော့ စာအုပ်လေးဆီမျက်စိလေးရောက်ရုံပဲရှိသေးတယ် “ဟီးဟီး ဟားဟား” နဲ့ ဟိုဘက်စက်က ရီနေတယ် “ဘာတုံးဟ ဟိတ်ကောင်ဘာတွေရီနေတာတုံး” ဆိုမေးတော့ “လာကြည့်လာကြည့်” တဲ့ဆိုလို့ သွားကြည့်လိုက်တယ် အံမယ် ဟုတ်တယ်ဗျ လူဦးနှောက်ထည့်ပေးထားတဲ့ မျောက်ဝံက ဆပ်ကပြနေတာ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ကြည့်နေ
လိုက်တယ် ပြီးတော့ Shakira သီချင်းကို ကလေးလေး တစ်ယောက် မျက်နှာပြောင်ပြီး က တာလဲ ကြည့်ပြီးရီနေလိုက်သေးတယ် စာပွဲပေါ်က စာအုပ်လေးကတော့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေရှာရော့ပေါ့
စာကြည့်စာပွဲကိုပြန်လာပြီးတော့ ဒီတစ်ခါတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဘာပြောပြော စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး စာပဲလုပ်တော့မယ် ဂျီမေးပါ အောက်လိုက်တာကောင်းပါတယ် ဆို အောက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ စာအုပ်လေးအာရုံစိုက်လိုက်တဲ့ခဏလေးမှာပဲ ၀ီးရောင် ၀ီးရောင် ဆို ဖုန်းက ထအော်ပါလေတော့တယ် “ဟလို အကိုပြော” ဆက်တဲ့သူက Ph.D တက်နေတဲ့ အကိုကြီးဆိုတော့ “အေးညီလေး ကို ဒီမှာ ဟော့ပေါ့လုပ်ထားတယ် လာခဲ့” ဆိုတော့ အကြီးက တကူးတက ခေါ်တာဆိုတော့ ငြင်းလို့ မကောင်းဘူးလေ “ဟုတ် အကို ကျွန်တော် ရေချိုးပြီးတက်လာခဲ့လိုက်မယ်လေ အေးညီလေး ဒီနေ့ ဦးထွဋ်တိုက်မယ်လို့ ပြောတယ် VAT 69 တိုက်မယ်တဲ့ ဆိုလို့ ဟော့ပေါ့လုပ်လိုက်တာညီလေး မြန်မြန်လာခဲ့ ဟုတ် အကို” ဆိုပြီး လှန်ထားတဲ့စာအုပ်လေး ပိတ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ နဂိုကယူခဲ့တဲ့ စာအုပ်စင်လေးပေါ်မှာ စနစ်တကျ ပြန်ထားလိုက်ပါတယ် …..မင်းက ငါနဲ့ မှ မတည့်တာ ………………….